Revo Uninstaller Pro ကို Crack - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Full Version - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » Revo Uninstaller Pro ကို Crack – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Full Version
Revo Uninstaller Pro ကို Crack – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Full Version
အားဖြင့် softkelo | စက်တင်ဘာလ 18, 2017
Revo Uninstaller Pro ကို Crack Revo ဖယ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးပရီမီယံဗားရှင်းကိုသက်ဝင်စေရန်ကူညီပေးသည်. ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုကွန်ပျူတာထဲကနေအားလုံးမလိုချင်တဲ့ software ကို uninstall လုပ်လိုက်နဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည်. သငျသညျကို uninstall လုပ်လိုက်သို့မဟုတ် Add ကနေဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကို Remove နိုင်ခဲ့မဟုတ်ရင်တောင်.
Revo Uninstaller Pro ကို Crack 64 နည်းနည်း Microsoft ကအိမ်မှာပြတင်းပေါက်များအတွက်. ဒါဟာ applications များ uninstalls နှင့်ဒါ့အပြင်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရရှိနှင့်ပရိုဂရမ်ရဲ့ဖယ်ရှားမှုကိုလမ်းဖြင့်သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်၏လမျးဖွငျ့၏နောက်ကျော၌ကျန်ကြွင်းအိမ်မှာပြတင်းပေါက် registry ကို entries တွေကိုဖယ်ရှားရန် feature က၎င်း၏ထိရောက်သောအင်ဂျင်လျင်မြန်စွာအားလုံး cussed အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပစ်.
Revo Uninstaller Pro ကို Crack Download
Revo Uninstaller Pro ကို Crack
သင်ညာဘက်ရာအရပျကို download မှာ Revo ဖယ်ရှားမှုကိုအက်ဗားရှင်းကိုရှာဖွေနေပါသည် Revo Uninstaller အပြည့်အဝ Crack.
Revo Uninstaller Pro ကို 3.1.6 သငျသညျဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ် uninstall လုပ်ဖို့နှင့်ပြဿနာများမရှိဘဲသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထူထောင်မလိုချင်တဲ့ applications များဖယ်ရှားပစ်ရကူညီပေးသည်! သငျသညျပြဿနာများ uninstall လုပ်ရှိသည်နှင့် "အိမ်ပြတင်းပေါက် packages များနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှသူတို့ကို uninstall မနိုင်လျှင်ပင် (upload သို့မဟုတ် packages များနှင့်အတူကွယ်ပျောက်လုပျ)"panel က applet manipulate. ဒါကြောင့် အက်ကွဲနှင့်အတူ Revo ဖယ်ရှားမှုကိုလိုလားသူအခမဲ့ download သင်တို့သည်ဤမျှတစ်ဦးသင်သည်လည်းအမှတ်စဉ်သော့ downloads, အတွက်ပူးတွဲထားသည်၎င်း၏ထင်ရှားတဲ့သော့ခတ် features တွေလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က၎င်း၏အက်ကွဲရှိပါက sign up ကိုနိုင်ကမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည့်အခါညာဘက်အများဆုံးထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: ကားမောင်းသူ Booster 2.4 Key ကို - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လိုင်စင် Pro ကို + serial
Revo Uninstaller Pro ကို Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ:
ပိုပြီး update ကိုပြဿနာများကိုအဘယ်သူမျှမ.
စားကြွင်းစားကျန်များအတွက်တိုးချဲ့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ - ပိုပြီးဟာ advanced scanning algorithms.
စနစ်ကပြောင်းလဲမှုများ real-အချိန်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး - စဉ်အတွင်းအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်း.
multi-level ကို Backup ကိုစနစ်က - အပြည့်အဝ Registry ကို backup လုပ်ထားအပါအဝင်.
အဆိုပါမှတ်တမ်းများ Database ဟာ၏သုံးစွဲမှု - ပိုကောင်းဖယ်ရှားရန်အဘို့အတပ်ဆင်ခမှတ်တမ်းများတစ်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု.
command line program ကိုဖယ်ရှားရန်ထောက်ခံမှု.
အဘယ်အရာကိုနယူး Revo Uninstaller ခုနှစ်တွင် Pro ကို 3.1.9:
- Browser ကို Cleaner အတွက် Microsoft က Edge များအတွက် Added ထောက်ခံမှု
- Fixed အသေးစား bug တွေ
ဒေါင်းလုပ် & Program ကို Install.
အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဒါဟာ Run မနေပါနဲ့, ဒါကြောင့်အပြေးလျှင်ထို့နောက်သူကပိတ်ဖို့.
လိုင်စင်ဖိုင်တွဲထဲကဖိုင်တွေကို revouninstallerpro.lic copy.
ပြတင်းပေါက် desktop နဲ့စာနယ်ဇင်းကိုသွားပါ (Windows Key + R ကို) နှင့်ဖွင့်လှစ်ပြတင်းပေါက်ယခုရှိပါတယ် "% ALLUSERSPROFILE%" paste ကဒီမှာလိုင်စင်ကူးယူကြောင်း "VS Revo Group မှ Revo Uninstaller Pro ကို" နှင့်ငါးပိကိုသွား.
အဆင့်4ကနေ:
ကို C "ရန် Go:\_ဤနေရာတွင်လိုင်စင်ကူးယူကြောင်း ProgramData VS Revo Group မှ Revo Uninstaller Pro ကို "နှင့်ငါးပိ.
← ကားမောင်းသူ Booster 2.4 သော့ – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လိုင်စင် Pro ကို + serial Tweakbit Speedtest Optimizer Crack – လိုင်စင် Key ကို + Keygen →
Winx DVD ကို Copy ကူး Pro ကို Keygen - 3.7.2 serial + လိုင်စင် Key ကို Code ကို 2017 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်